::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बङ्लाको विमान दुर्घटना, २२ नेपालसहित ४९ जनाको मृत्यु:: Rojgar Manch ::
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बङ्लाको विमान दुर्घटना, २२ नेपालसहित ४९ जनाको मृत्यु
मंगलवार, २०७४ फाल्गुन २८ गते ०१:३४
यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुँदा २२ नेपालसहित ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा २२ जना घाइते भएका छन् । उनीहरुमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ ।
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौं आएको विमान अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएको थियो । ७६ सीट क्षमताको दुर्घटनाग्रस्त विमानमा २८ महिला र २ जना बाललालिकासहित ६७ यात्रुहरु थिए । उनीहर मध्ये ३३ नेपाली थिए ।
मालदिभ्स र चीनका एकरएकजना विमानमा सवार थिए । बाँकी बंगलादेशी नागरिक थिए । विमानमा रहेका दुई बालवालिका पनि बंगलादेशी नै हुन् ।
गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंक ढकालका अनुसार २२ नेपाली, २२ बंगलादेशी नागरिक, एक चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको छ ।
चालक दलका चारै सदस्यको पनि दुर्घटनामा निधन भएको छ ।
घाइतेमध्ये २२ जनामा ११ नेपाली छन् । ९ वंगलादेशी, एक माल्दिभ्सका नागरिक छन् भने एक घाइतेको राष्ट्रियता खुलेको छैन । तर, उनी बंगलादेशी भएको अनुमान छ ।
केशव पाण्डे( मेडिसिटी अस्पताल नख्खु
विमानबाट उद्धार गरिएका मध्ये सिनामंगलस्थित केएमसी मेडिकल कलेजमा करिब एक दर्जनको उपचार गरिँदैछ । त्यहाँ रहेका बिरामीहरुमा इमराना कबिर, पिञ्ची धामी र समिना व्यञ्जनजकारलाई आइसीयूमा राखिएको छ ।
केएमसी पुर्‍याइएका मध्ये ४ जनालाई अन्य अस्पतालमा भनाए गरिएको छ । किशोर त्रिपाठी, हरिप्रसाद सुवेदी र दयाराम ताम्राकारलाई ग्राण्डी अस्पतालमा रिफर गरिएको छ भने केशव पाण्डेलाई मेडिसीटी अस्पतालमा रिफर गरिएको छ । ग्राण्डी अस्पतालका चक्रराज पाण्डेले चार जनाको उपचार भइरहेको बताए ।
601. प्रवासी कामदार अध्ययन कार्यदल गठन
602. बौद्धमा न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका दन्त चिकित्सकको निशुल्क शिविर
603. वैदेशिक रोजगारमा हुनेको औसत बचत साढे १२ हजार
604. मलेसियामा बायोमेट्रिक परीक्षण नगराएका कामदार जान रोक
605. एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग : मन्त्री बस्नेत
606. त्रिभुवन विमानस्थल विश्वकै तेश्रो खराव
607. पोखराका शाखा तथा एजेण्टले राहत कोष स्थापना गर्दै
608. ईपीएस परीक्षाफल प्रकाशित
609. पहिरोपीडितलाई विदेशी नागरिक पटेलको सहयोग
610. कोरिया जाने नेपालीलाई मोबाइल
611. एमालेभित्र किचलो बढ्दै
612. संखुवासभाका पहिरोपीडितलाई घटनास्थलमा नै राहत वितरण
613. इजरायलले तीन सय नेपाली कामदार लैजाने
614. मृतकको क्षतिपूर्ती दोब्बरले बढयो
615. नेपाली कामदार यूरोप-अमेरिका पठाउने सरकारको तयारी
616. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘फायरवाक सेमिनार’ हुँदै
617. ६ देशका लागि राजदूत सिफारिस
618. ७५ जिल्लामा नै पुस्तकालय स्थापना गर्ने श्रेष्ठ सम्मानित
619. इराक पुगेका १२ नेपालीको हत्या भएको आज दश वर्ष पुरा
620. वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक फेरिए
621. विदेश बस्ने नेपालीलाई मन्त्री पण्डितको कटाक्ष
622. महासंघको अध्यक्षमा खड्का बिजयी
623. स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा चुनावी भिडन्त
624. महासंघको निर्वाचन प्रकृया अन्योलमा
625. स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको साधारण सभा सम्पन्न
Results 726: You are at page 25 of 30